पटक–पटक काठ तस्करीमा भारतीय गाडीको प्रयोग, कतै स्थानीय प्रशासको मिलेमतो त छैन ? - पटक–पटक काठ तस्करीमा भारतीय गाडीको प्रयोग, कतै स्थानीय प्रशासको मिलेमतो त छैन ?
पटक–पटक काठ तस्करीमा भारतीय गाडीको प्रयोग, कतै स्थानीय प्रशासको मिलेमतो त छैन ?
२०७४, २७ श्रावण, 05:17:45 AM
२७ साउन, काठमाडौं । रौतहटमा हिजोआज काठ तस्करले भारतीय सवारीसाधनको प्रयोग गरेर काठ तस्करी गरिरहेको पाइएको छ ।
बिहीबार राति तस्करले काठ तस्करी गर्ने क्रममा एउटा भारतीय नम्बरको सवारीसाधन छाडेर भागेका छन् । भारतीय युपी ४१ एटी ३८१२ र नेपाली ना ३ च ६१५० नम्बरको प्लेट रहेको पिकअप भ्यान छाडेर भागेका हुन् ।
वन कार्यालयको वन गस्तीले बिहीबार राति गोली चलाएपछि मात्र काठ तस्करले काठ सहितको पिकअप भ्यान छाडेर भागेका थिए । जिल्लाको वृन्दावन गाउँपालिका अन्तर्गतको विश्रामपुरबाट वन गस्ती टोलीले १० राउण्ड गोली चलाएपछि काठ सहितको एक थान पिकअप भ्यान नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला वन कार्यालय रौतहटले जानकारी दिएको छ ।
वन गस्ती टोलीले वृन्दावन गाउँपालिकाअन्तर्गत विश्रामपुरबाट एउटै गाडीमा दुईवटा नम्बर प्लेट भएको पिकअप भ्यानमा रहेको ६ थान सालको गोलियासहित नियन्त्रणमा लिएको हो ।
पूर्व–पश्चिम मुख्य राजमार्गबाट वन प्रवेश गरेको गाडीलाई वन गस्ती टोलीले पछ्याउँदै जाने क्रममा काठ तस्करले काठ सहितको पिकअप भ्यान नरोकेपछि १० राउण्ड गोली चलाएर सो भ्यान नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला वन कार्यालय रौतहटका वन अधिकृत दीर्घनारायण कोइरालाले बताए । उक्त पिकअप भ्यानबाट ६० क्युफिट बराबरको ६ थान गोलिया बरामद गरिएको र तस्कर भने फरार रहेको वन अधिकृत कोइरालाले जानकारी दिए ।
बिना प्रमाण पुर्जी अवैधरुपमा काठ लैजाँदै गरेकोे अवस्थामा नियन्त्रणमा लिइएको उनकोे भनाइ छ । यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला वन कार्यालय, रौतहटले जनाएको छ । यसअघि पनि वन कार्यालय, रौतहटले मङ्सिरमा भारतीय नम्बर प्लेटको बिआर ०६ जिए ९६८७ नंका पिकअप भ्यान काठसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
पछिल्लो समयमा वनभित्र तस्करले पिकअप भ्यान नै लगेर काठ लैजाने गरेको छ । ट्रक, पिकअप भ्यान, ट्याक्टर, टायरगाडा, मोटरसाइकल र साइकलका माध्यमबाट तस्करले वनबाट काठ लैजाने गरेको पाइएको छ ।
जिल्ला वन कार्यालय, रौतहटले दिएको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा पिकअप भ्यान दुई, ट्याक्टर आठ, टायरगाडा तीन, मोटरसाइकल चार र साइकल २९ थान बरामद भएको छ ।
सुरक्षा घेरा नै तोडेर कसरी जंगल पस्छन् तस्कर ?
जिल्ला वन कार्यालय अन्तर्गत जिल्लामा रहेका वनको संरक्षणका लागि नेपाल प्रहरी र जिल्ला वन कार्यालयका कर्मचारीहरु बसेका हुन्छन् । उनीहरुको काम भनेको वनको संरक्षण र रेखदेख गर्नु हो । तोकिएको वन क्षेत्र भित्र कुनै पनि बोटविरुवा मास्न नदिनु उनीहरुको कर्तव्य हो तर पनि यतिका घेराबारा तोडेर कसरी वन छिर्छन् त तस्कर ? अनि जो चोर उस्कै ठुलो स्वर भने झै बनकै कर्मचारी चोरी तस्करी बढेको बताउँछन् । पटक पटक यस्ता घटना बाहिर आउँदा पनि सम्बन्धित निकाय किन त्यसको निराकरण गर्न सकिरहेको छैन ? एकै ठाउँ एकै किसिमका घटना, त्यो पनि बारम्बार घटि रहनु पक्कै पनि स्वभाविक मान्न सकिँदैन । शंका गर्ने विषय उब्जिएको छ । कतै तस्करहरु सँग नै खटिएका कर्मचारी र प्रशासन कै मिलेमतो त छैन ?